gvSIG Fonsagua, SIG loogu talagalay naqshadaha biyaha - Geofumadas
Febraayo, 2011 GvSIG, Engineering, Video
Waa qalab qiimo leh mashaariicda loogu talo galay biyaha iyo fayadhowrka ee qaababka hay'adaha wada shaqeynta. Guud ahaan, waxay la shaqaysay natiijooyin fiican Epanet, inkasta oo ay jiraan xaddidaad ku dhexjirta geeddi-socodka is-bed-beddelidda
Kadib raadinta sababaha gvSIG iyo Iskaashiga se aan la arki karin Habeenkii, waxaan qaatay waqti aan dib u eego dadaalkan oo u muuqda aniga oo ka mid ah tabarucyada ugu fiican ee software-ka oo bilaash ah si loo helo hay'ad iyo horumar dhaqaale bulsho.
gvSIG Fonsagua ayaa soo ifbaxaya qaabka mashruuca Iskaashiga Galiska ee ka shaqeeyay dalal kala duwan oo ku yaalla Bartamaha Ameerika iyo Afrika. Laakiin waxay ku taal koofurta Honduras halkaas oo horumarintaan lagu horumarinayo, kaas oo CartoLab iyo Ingeniería Sin Fronteras ay ku lug leeyihiin, waxaan xasuustaa markii aan ka hadlay khatarta isticmaalka Kordhinta casriga ee gvSIG 1.10.
Waayo-aragnimadu waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan. Natiijo ka timid dadaalro kala duwan iyo ka dib markii lagu jiray macne isku dayey in ay sameeyaan tangles iyagoo isku daraya ArcView (Waxaa laga yaabaa in burcad-badeed), Excel, Helitaanka iyo foomamka waraaqaha ee tigidhada aruurinta.
Inkasta oo tani ay tahay laba degmo oo ku yaal koonfurta Honduras, xaaladdu waxay la mid tahay meelo badan oo Latin America ah. Macluumaadka qotodheer, falanqaynta aan la qoondeeyn, ka saarida dhinaca dhaqaalaha, xaddidnaanta qalabka la adeegsado, isticmaalka sharci darrada ah ee software-ka, dib-u-dhiska dadaalka, gaaban.
Natiijada naqshadeynta, qalab ayaa lagu dhisay gvSIG 1.1.2, kaas oo ku socda qaabka desktop ama sidoo kale ku saabsan la qaadi karo. Tani waxay u shaqeysaa si macquul ah, xalinta wareegga ururinta alphanumeric, xogta kartoonka, qaabeynta nidaamka iyo soo saarista warbixinta.
Heerka baaxadda, waxay taageertaa qabashada macluumaadka gps caadiga ah qaabka jidadka. Tani waa haddii isku-daba-darrooyinka dhibcaha ba'an, ilaha, khadadka qaybinta, taangiyada, dadweynaha, iwm.
Kadibna, foomamka waxaa loo habeyn karaa gelitaanka macluumaadka, u oggolaanaya sharciyo ansax ah oo aan u baahnayn in la soo celiyo si badan. Shaqooyinkan ku saabsan kordhinta NavTable waxaa loola jeedaa tabo jilicsan. Tusaale ahaan mashruucan laba tabs, mid ka mid ah macluumaadka dhaqaale ee dadka ka-faa'iideystayaasha iyo mid xog farsamo la xiriira ilo iyo kaabayaasha, oo xuduudaheedu design iyo isticmaalka in loo tixgelin doonaa in falanqaynta ayaa laga soo ururiyey loo isticmaalay.
Marka xogta la galo, naqshadaha dhismaha ayaa la samayn karaa kaasoo lagu dhisay khariidada. Waxaa jira iman kara ee gvSIG CAD / GIS laakiin Fonsagua ka mid qalab dheeraad ah oo jadwal caadi ah in design ah ee shabakadaha biyo, sida muujinaysa markii dhibic waa qalab khaanada Downlaods, markii labadii shabag lahaayeen, sidoo kale ansixinta iyo wada joogtada topological si ay u ilaaliyaan joogta ah . Waxa kale oo suurtogal ah in la isku daro meelaha saamaynta ku leh, xulashada jaaliyadaha iyo ka-faa'iideystayaasha inay mudnaanta siiyaan iyada oo ku saleysan qiimaha / kharashka / saameynta xiriirrada.
Ka dib, kiisaska shabakadaha ku salaysan culeyska, falanqaynta waxaa lagu fulin karaa xuduudaha iyo xaaladaha qaabeynta. Nidaamka bandhigayaa miis halkaas oo qaybaha kala duwan waa in uu ciyaaro waxa sameeyey calculators our HP jir ah iyo la'aanta ka mid ah, iterate, iterate ilaa aan hoos u khasaaraha ama waan karnay xogta Waxaa lagu bedeli karaa qayb ka mid ah sida dhexdhexaadiyaha, dhererka iyo nooca qalabka si loo hubiyo in xawaaraha iyo khasaaraha ay ku jiraan xuduudaha la aasaasay. Aad u xiiso leh shaqadan, sababtoo ah midabada cas cas oo feejignaan haddii ay wax qalad yihiin iyo haddii ay dhacdo in lagu daro ama la tirtiro bulshada waa inaad mar labaad ku xisaabisaa xisaabinta.
Nidaamka ayaa ku salaysan midka uu isticmaalo Ingeniería Sin Fronteras, inkastoo ay jiraan qorshayaal ay ku tagaan ka baxsan.
Waxyaabaha kale ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa naqshadeynta, sida taangiyada ama barkimada. Adoo tilmaamaya xuduudaha la xidhiidha xariiqda wareejinta iyo kaydinta waxaad xisaabin kartaa qadarka korontada looga baahan yahay bamka. Si fudud u fudud!
Ka dibna, waxaad soo saari kartaa warbixinno aad ku taageeri kartid xogta macluumaadka farsamada ama la xiriiro natiijooyinka. Macluumaadka waxaa lagu keydinayaa xogta xog ururinta iyo qaabka qaababka.
Marka la soo koobo, waa qalab weyn oo loogu talagalay naqshadeynta nidaamyada biyaha la cabbo, oo leh isdhexgalka macluumaadka kartoonka.
Ma ilaawi karno in ay si xor ah u heli karto, maadaama ay la shaqeyso liisan GPL ah. Koodhkaagu waa la heli karaa haddaad rabto inaad dib u cusbooneysiiso mashruucyo isku mid ah.
Tusaale ahaan waxaan kaa tagaa fiidiyow tijaabo ah, inkastoo bogga Fonsagua waxaa jira fiidiyowyo badan, wax badan oo ku saabsan mashruuca iyo tusaala ahaan xogta.
Dhibaatooyinka ka taagan
Dhibaatooyinka xooggan ee gvSIG Fonsagua waa kala-jajabinta qalabka ka jira barnaamijyada iskaashiga kala duwan ee ka shaqeeya mawduucyo la mid ah. Kaliya Honduras, xafiisyada AECID ee Waqooyiga iyo Galbeedku waxay leeyihiin khadado gaar ah oo loogu talagalay mashaariicda biyaha oo ay ka helaan dhaqaalaha guud ee Spain oo isku duwaya Xafiiska Farsamada Hawlaha Farsamada. Waxay noqon kartaa fursad wayn haddii ay maamulaan si ay u dhexgalaan horumarkan iyada oo ah qalab loogu talagalay qorsheynta iyo isticmaalka Qaybaha Farsamada ee munaasabadaha iyo degmooyinka. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid xiiso leh in la haysto version nalalka ah ee la socoshada guddiyada biyaha, kuwaas oo ah kuwa soo afjaraya joogtaynta. Dadaallada noocan ahi waxay xaqiijinayaan sii wadida dadaalkan ku saabsan isbeddelka waalan ee dawladaha wadamadan oo aysan jirin wax shaqo ah oo rayid ah oo la fuliyay iyo sidoo kale in la hubiyo isku-duwidda dadaalka iskaashiga.
Waxaa cad in EWB loogana faa'iidaysto dadaalka dalalka kale, laakiin waxaa jira deeq kale oo ka shaqeeya on arrinta biyaha sida Peace Corps, kuwaas oo mudnaanta maalgelinta ee Honduras ayaa hadda socda ee la dhigaayo nidaamyada biyaha. Inta badan wada-hawlgalayaashu waxay diiradda saaraan wareegga isku midka ah, sidaas darteed waa in aan hubinnaa in aan ka fikirno siyaabaha loo faafiyo qalabka ee dhacdooyinka kale ee iskaashiga.
Ku aadida gvSIG ee noocyada dambe ee la soo dhaafay waa cilad kale, inkasta oo ay ku xiran tahay dhinacyo kala duwan, oo ka mid ah -muuqata- hubin la'aanta qaabka deg dega ah ee gvSIG wuxuu ku jiri doonaa maalmaha 347.5 iyo haddii la heli doono in la heli karo qaybta la qaadi karo. Waxa aanu filaynaa in arrintan lagu xalin doono si fudud ka dib markii shirkadda iCarto u ahaada Qayb ka buuxa Ururka gvSIG ah, taas oo u muuqata guusha weyn ee xoojinta tayada dhar warshadaha. Taas awgeed waxaan u maleyneynaa in ay ka sii gudbi karto arrinta ka baxsan biyaha nadiifka ah ee dhulka hoostiisa, taas oo ah nasiib daro weyn.
Ugu dambeyntiina, caqabadda saameynta siyaasadda dadwaynaha, taas oo ah mid ka sii adag laakiin waxay noqon kartaa qiimo weyn haddii khibrada, nidaamka iyo nidaamka loo bixiyo qalab -xor ka noqoshada aragtida hay'adaha- In la taageero habraaca Qaab-dhismeedka Qodobbada iyo qaabeynta adeegga biyaha ee waddamada qaxoontiga.
Arag in badan gvSIG Fonsagua
Post Previous«Previous Koorso bilaash ah oo bilaash ah
Post Next XYZtoCAD, iskuduwaha shaqada ee AutoCADNext »
2 Jawaab "gvSIG Fonsagua, SIG loogu talagalay naqshadaha biyaha"
Thanks fran, waxaan sameyn doonaa isbedelka isla marka ugu dhaqsaha badan marka aan ku soo noqdo jihaadka.
fuga isagu wuxuu leeyahay:
Laga soo bilaabo Cartolab iyo naftayda xubin ka mid ah kooxdii soo saartay gvSIG Fonsagua, waxaan si weyn uga mahadcelineynaa falanqaynta aad samaysay arjiga. Faallooyinka sidaan oo kale ah ayaa naga caawiya in aan sii wadno shaqadeena isku dayga ah in aan sameyno wax waliba oo suurtagal ah
Waqtigan xaadirka ah waxaan la xiriirnaa hay'ado dhowr ah si loo maalgeliyo horumarinta sifooyinka cusub ee codsiga iyo u haajiraan gvsIG ugu dambeeyay.
Kaliya hal faahfaahin si loo caddeeyo. Codsiga ma aha mid loogu talagalay in lagu sameeyo farsamada farsamo ee mashruuc dhisma, laakiin halkii ay awoodi lahayd in mudnaanta la siiyo fursadaha suurtogalka ah ee suurtogalka ah. Tani waa mid ka mid ah qodobada ku adag in la gudbiyo. Habka of Plan for Comprehensive Management Resource Water waa meesha codsiga uu hoos u dhaco, waxay leedahay dhowr marxaladood oo kala duwan, iyo had iyo jeer dooran si ay u sameeyaan qorshe guud halkaas oo fursado dhowr ah ayaa la rabay iyo ka dib ka dhigi wajiga dhismaha koowaad, laakiin waxaa jira dad badan oo kuwaas oo jecel inay si toos ah u aadaan marxaladda dhidibada ah, taas oo ka imanaysa aragtideena aanu ahayn midka ugu habboon.